LIVE: Shirkii Midnimo 2 oo maalintii labaad galay iyo jawiga guud ee magaalada Garbahaarey | Saadaal Media
LIVE: Shirkii Midnimo 2 oo maalintii labaad galay iyo jawiga guud ee magaalada Garbahaarey
Mar 2, 2015 - jawaab
Wararka ka imaanaya magaalada Garbahaarey ee caasimadda gobalka Gedo ayaa sheegaya in maalintii labaad uu ka soconayo halkaasi shirweynaha Midnimo wajigiisa labaad waxaana ka qeyb galaya dad kala duwan oo ka kala yimid Soomaaliya iyo caalamka.
Shirkani ayaa looga arrinsanayaa xaaladaha siyaasadeed ee ka jira deegaannada Jubba iyo sidii loo heli lahaa maamul ku yimaada rabitaanka dadka shacabka ah.
Wariyaha Saadaal Media ee Garbahaarey oo ku sugan madasha shirka ayaa ku warramaya in shirka uu u socdo si wanaagsan oo ay jiraan siyaasiyiin jeedinaya khudbado kana hadlaya masiirka umadda Jubbooyinka.
Dhinaca kale, jawiga guud ee magaalada Garbahaarey ee xarunta gobalka Gedo ayaa ah mid wanaagsan halka shirka uu ka socdana waxaa ku sugan siyaasiyiin caan ah oo ku lug leh siyaasadda Jubbooyinka iyo Gedo.
Saadaal Media kala soco wararkii ugu dambeeyay ee shirkani